Home News Xildhibaan Khaliif ”Gudoomiye Mursal waa la xiray xildhibaanada waa loo diiday iney...
Xildhibaan Khaliif ”Gudoomiye Mursal waa la xiray xildhibaanada waa loo diiday iney la kulmaan”
Xildhibaan ka tirsan golaha Shacabka kana mid ahaa Xildhibaanada Maanta Muqdisho kusoo dhaweeyay Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa sheegay in Guddoomiyaha Golaha Shacabka la xiray.
Xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar ayaa sheegay in Guddoomiyaha la xiray,sidoo kalena loo diiday in ay u tagaan Xildhibaano doonayay inay la kulmaan.
”Guddoomiyihii Baarlamaanka ee qabtay mooshinkii aan ka keenay Madaxweynaha Maanta waa maxbuus,waan ka xunahay inaan sheegno laakin madaxweyne xiraayo oo weeraraayo guddoomiye baarlamaan ayuu yiri Xildhibaan Xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar”
waxaa uu sidoo kale sheegay in arrintani ay nasiib daro ku tahay madaxda dalka maadama ay caburinta siyaasiyiinta ku qarinayaan fadeexada heysata.
Hadalkaan ka soo baxay Xildhibaan Xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar ayaanan weli wax jawaab ah aysan ka bixin Madaxtooyada Soomaaliya iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Previous articleBarakacayaal iyo Ciidanka Boliiska oo Bannaanbax loo soo saaray Waddooyinka Xamar.
Next articleDhageyso; Gudoomiye Cawad oo awaamiir kusoo rogay shaqaalaaha xarunta Golaha Shacabka